Socdaalkii Hadraawi ee Umeå, Sweden
Hargeysa Online: -Waxaa dabayaaqadii bisha December nagu soo booqday magaalada Umeå oo ku taala waqooyiga dalka Sweden, abwaanka soomaaliyeed ee caanka ah Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi).
Hadraawi oo booqashadiisani la xidhiidho socdaalkiisii wacyigelinta, waxaa magaalada Umeå loogu soo dhaweeyay si weyn oo dadweynaha soomaaliyeed ee halkaas degani aanay u kala hadhin. Saddexdaas habeen ee uu Abwaan Hadraawi nala joogay wuxuu halkaas ka jeediyay saddex muxaadaro, mid dumarka u gaar ahayd iyo laba ragga u gaar ahaa.
Muxaadarada koowaad, oo ku saabsanayd beelaha la hayb sooco (Midgaha, Tumaasha, Yibraha, iyo i.w.m) waxaa abwaanka hortii halkaas ka hadlay Axmed Maxamed Muuse (Daakir), Gudoomiyaha U S R. (United Somali Roots) oo ka sheekeeyay cadaadiska soo jireenka ah ee lagu hayo dadkaas soomaaliyeed ee aan waxba kaga duwanayn walaalahooda kale. Daakir waxa kale oo uu halkaas ka xusay in Hadraawi yahay ninkii soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee dood ka fura quudhsiga lagu hayo beelahaas soomaaliyed.
Hadraawi waxa uu hadalkiisii ku bilaabay in musiibada soomaalida haysataa aanay meel kale ka socon ee ay la xidhiidho takoorkaa ay walaalahood ku hayaan, ilaa ay arintaas wax ka qabtaana aanay dhibaatada soomaalidu dhamaanayn. Hadraawi isaga oo ka sheekaynaya sababta loo yaso beelahaas soomaaliyeed waxa uu sheegay in aanay jirin wax raad ah oo taariikhda laga helayo oo tilmaamaya ama ka sheekaynaya arintaas laakiin uu isagu u malaynaayo in beelahaasi ay berigii hore ahaayeen beelo xoog badan oo boqortooyo ah, maadaama ay farsamada gacanta ay ku keliyaysteena (samaynta hubka, midiyaha, gudinta, kabaha iwm) ay sidaa ku guumaysan jireen (ku yasi jireen) soomaalida inteeda kale, waayo soomaalida kale waxay ahaayeen xoolodhaqato aan xataa middida ay xoolaha ku gawracdaan samaysan karin. Berigii dambe markii laga xoog roonaaday beelahaasna (midgaan, Yibir, Tumal iwm) waxaa dhacday in wixii ay soomaalida kale ku guumaysan jireen iyagii lagu gumaysto (oo gun lagu sheego). Hadraawi waxa uu sheegay in aragtidiisan ay ka markhaati kacayaan magacyo badan oo la yidhaahdo meelo dhulka soomaaliyeed ka mid ah.
Muxaadaradaasi oo ahayd mid soomaalida lagu dareensiinayo dhibaatada ay arintani leedahay iyo baahida loo qabo in laga hadlo oo laga doodo oo la faafiyo, markii ay dhamaatay waxa dadkii halkaas joogay ay dhamaantood isla qireen in ay xaqdaro tahay yasida lagu hayo beelahaas soomaaliyeed, loona bahan in wax laga bedelo.
Muxaadarada labaad, waxa ay ku saabsanayd socdaalkii uu Hadraawi ku soo maray dhulka soomaalidu degto ( Somaliland, Somalia iyo Djibouti). Abwaanku waxa uu ku adkeeyay in socdaaladiisa aanay ujeedo kale ka dambayn aan ka ahayn xoojinta nabada iyo wacyigelinta dadka iyo isaga oo ilaashanaya shacbiyadiisa iyo taageerayaashiisa. Abwaanku waxa uu sheegay in markii uu Ingiriiska, oo uu mudo degannaa, ka noqday, uu socdaalkiisa ka bilaabay magaalada Hargeysa, halkaas oo uu ku qabtay baraamijyo kala duwan Jaamacada Hargeysa, Hotel Maansoor iyo Hotel Ambassador. Ka dibna uu u sii gudbay magaalada Gebilay iyo magaalada Boorama. Markii uu Hargeysa ku soo laabtayna uu halkii ka si waday baraamijyadii. Intaa ka dib waxa uu abwaanku u sii gudbay magaalada Burco isaga oo uga sii talaabay xagaa iyo magaalada Ceerigaabo. Ceerigaabo-na uu uga sii gudbay ilaa magaalada Berbera isaga oo dhinaca xeebta maray. Markii uu Somaliland dhameeyay waxa abwaanku uu u gudbay Djibouti halkaas oo uu uga tii gudbay koonfurta soomaaliya. Dadka badankoodu way ka dharagsanaayeen socdaalka Hadraawi ku soo maray koonfurta soomaaliya laakiin waxa badankooda war cusub ku ahaa socdaalka Hadraawi uu ku soo dhexmaray Somaliland gudaheeda.
Hadraawi isaga oo ka hadlaaya dhibaatooyinka soomaalida haysata maanta kuwa ugu waaweyn, waxa uu sheegay in dadka kalsoonidii ka dhimatay, oo dadkii dibada uun wax ka sugayaan. Ha ahaato iyaga oo somalida qurbaha jooga talo iyo waxqabad ku tuhmaya ama iyagoo nin cad kaalmo iyo waxqabad ka sugayaba, laakiin aanay isu haysan inay yihiin dad iyagu waxqabsan kara oo xal u heli kara dhibaatooyinka haysta.
Shaqo la’aanta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waayen ee dadka haysta. Iyada oo shaqo la’aantaasi jirto ayaa haddana waxa shaqooyinkii yaraa ee dalka ka jiray cidhiidhi geliyay oo soomaalidii suuqa ka saaray dad tiro badan oo ka yimi wadanka Ethiopia , kuwaas oo marwalba diyaar u ah inay ku shaqeeyaan sicir ka jaban ka soomaaligu ku shaqaynayo. Dhibaatadaasi waxay si gaar ah u saamaysaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland.
Qaadka ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadka haysta. Abwaanku waxa uu ka sheekeeyay sababta uu isaga joojiyay cunida qaadka, waxaanu yidhi markaan arkay dhibaatada qaadka, dadkiina aanan ka wacdiyi karahayn in ay joojiyaan cunida qaadka maadaama anigiiba aan cunayo ,ayaan go’aansaday horta anigu inaan iska joojiyo.
Abwaanku waxa uu ka hadlay arimo kale oo badan oo ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinka la soo darsa qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha degen iyo sidii looga gudbi laha dhibatooyinkaas. Ka dib markii dhawr su’aalood la weydiiyay waxa abwaanku uu ku soo khatimay hadalkiisii in uu halkaas ka akhriyo mid ka mid ah gabayadiisa dambe ”Rag Siyaasi wada noqoay”.
Kullanka saddexaad waxa uu abwaanku la yeeshay dumarka soomaaliyeed ee degen magaalada Umeå, kulankaas oo aan ragga u furnayn wixii lagaga wada hadlay kama warhayno.
Cabdirisaaq X. Cali Cadib
Tafatiraha Hargeysa Online
Maamulka Hargeysa Online